Voices cusub ee USA
Voices waa a collection of sheekooyinka ku qoran by qaxootiga iyo muhaajiriinta ku nool USA.
WeaveTales waa sheeko uu adduunka oo dhan
Weavetales ayaa raadineysa sheekooyinka dadka qaxootiga ah, waddanka u soo guurey, iyo kuwa kale oo ku barakacay dad. Noo sheeg sheekadaada, oo waxaan maqlay by dunida. Sida ay muujinayso magaca, ka WeaveTales website isu keentaa ee threads ee warkii badan, ama sheekooyin, galay isku waslad. WeaveTales ururiyaa oo hadiyado sheekooyinka dadka barakacay. Waxaan soo bandhigaan ... Akhri wax dheeraad ah
Mahadnaq American cusub
Magacaygu waa Ekhlas Ahmed oo aniguna waxaan ahay badbaaday xasuuqii ka xasuuqa ka socda Darfur ah, Sudan. Tegida aan hooyo waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag in aan sameeyey nolosheyda. meeshii aan u yeedhay guriga waxaan ka tagay, meeshii lagu qabtay riyooyin iyo waxyaalaha qarsoon oo dhan, laakiinse anigu uma aan sameeyey ... Akhri wax dheeraad ah
Ceyrsaneysa riyadii American
Waxaan ku dhashay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Baraka. meel A halkaas oo samada had iyo jeer waa buluug. Oo qorraxdii waxay ku had iyo jeer waa ka baxay. ridey A isagoo aan helo wax yar aad u kulul. Heerkulka kala duwan 68 darajo oo F ah in 90 darajo F. meel A halkaas oo music soo jeeda dhaqamada kala duwan had iyo jeer waa ciyaaryahan ... Akhri wax dheeraad ah
Maxaa yeelay cuntada wanaagsan dareemeysaa guriga
Wixii ku cusub oo badan, cuntada waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah links ee la soo dhaafay ay u leeyihiin in ay dalka ay ka yimaadeen. Fadhiga miiska wareegsan cuntada guriga ayaa waxa uu noqon karaa waxa kaliya oo uu dareensan yahay sida guriga. Waxaan ku Bosnia qaatay yaraantaydii, dalka ah oo cunnada waa sida map ka mid ah ay la soo dhaafay. Bosnia ... Akhri wax dheeraad ah